-- Location -- AdmiraltyAlexandraAng Mo KioBalestierBeach RoadBedokBishanBoat QuayBoon LayBugisBukit BatokBukit PanjangBuona VistaChangi AirportChangi VillageChinatownChoa Chu KangCity HallClarke QuayClementi New TownClementi ParkCommonwealthEast CoastEunosFarrer ParkGeylangHarbourfrontHollandHougangJurong EastJurong WestMacphersonMandaiMarinaMarine ParadeNewtonNovenaOrchardOthersPasir RisPaya LebarPotong PasirPunggolRaffles PlaceRiver ValleyRochorSeletarSembawangSengkangSentosa IslandSerangoon RoadTampinesTanglinTanjong PagarTelok BlangahTengahThomsonToa PayohTuasUpper Bukit TimahUpper East CoastUpper ThomsonWest CoastWoodlandsYio Chu KangYishun -- District -- -- Ward -- -- အိမ်ရာအဆောက်အအုံ အမျိုးအစား -- တိုက်ခန်းကွန်ဒိုလုံးချင်း၊ ဗီလာဆိုင်ခန်း၊ ရုံးခန်းစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာမြေကွက်အခြား -- သက်တမ်း -- ဘိုးဘပိုင်စာချုပ်ဖြင့် ငှားရမ်း သုံးပိုင်ခွင့် -- အိပ်ခန်းများ -- 12345+ -- အိမ်သာများ -- 12345+
အခြား အသင်းဝင်များနှင့် တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်ရန်
သင့်ရဲ့ အိမ်ခြံမြေ တန်ဖိုးကို ကြည့်ရှုရန်
အခြားထူးခြားသော အချက်အလက်များကိုရယူနိုင်ရန် ၀င်ရန်!
သင့်ရဲ့ အီးမေးလ် နှင့်စာရင်းသွင်းရန်!
အသင်းဝင်ပါက သင်သည် CrowdTwo၏ သတ်မှတ်ကန့်သတ်ချက်များကို သဘောတူပါသည်။
-- အမျိုးအစား စာရင်း -- ၀ယ်ရန်ငှားရန်
-- အိမ်ရာအဆောက်အအုံ အမျိုးအစား -- တိုက်ခန်းကွန်ဒိုလုံးချင်း၊ ဗီလာဆိုင်ခန်း၊ ရုံးခန်းစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာမြေကွက်အခြား
သက်တမ်း -- သက်တမ်း -- ဘိုးဘပိုင်စာချုပ်ဖြင့် ငှားရမ်း သုံးပိုင်ခွင့်
အိပ်ခန်း တစ်စုံတစ်ရာ/ နောက်ထပ် 12345+
ရေချိုးခန်း/ အိမ်သာ တစ်စုံတစ်ရာ/ နောက်ထပ် 12345+
အနည်းဆုံး အကျယ်အ၀န်း/ဧရိယာ (ft²)
အများဆုံး အကျယ်အ၀န်း/ဧရိယာ (ft²)
ထူးထူးခြားခြား စာရင်း (၀ယ်ရန်)
Westmere · D22
ထူးထူးခြားခြား စာရင်း (ငှားရန်)
သင်က သင့်ကြော်ငြာမှတဆင့် ရလဒ်များကို ရရှိလိုသော အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်တစ်ဦးလား။
ကျွန်ုပ်တို့ က သင့်အား အိမ်ခြံမြေအပေါ် စိတ်ဝင်စားနေသော ၀ယ်သူ၊ဌားသူများနဲ့ဆက်သွယ်ပေးပါသည်။ ရလဒ်များမရရှိပါက သင့်အနေနဲ့တပြားတချပ်မှ ပေးဆောင်ရန် မလိုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ က ရလဒ်များကို ပေးဆောင်သည်၊ သင်က ကျွန်ုပ်တို့ ကို ထောက်ပံ့သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ တွေ အတူတကွ ပြုလုပ်နေသည်။ သင်က အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီး သင့်အဖွဲ့ အတွက် အစမ်းသဘောပြုလုပ်လိုပါက ကျွန်ုပ်တို့ နဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပေးပါ။ ထိုပေးကမ်းမှုမျိုးကို ပထမအကြိမ်ရောက်လာသော အဖွဲ့ များကိုသာ ကန့် သတ်ပေးထားပါသည်။
အချိန်ကာလ၊သက်တမ်း နှင့် သီးသန့်အချက်အလက်ပါဝင်မှု့
ဘာသာစကား: English | မြန်မာ